ချဲလ်ဆီး vs တော့တင်ဟမ်?? ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် ၂၃ အတွက် မိုက်ကယ်အို၀င်ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်များ - xyznews.co
ချဲလ်ဆီး vs တော့တင်ဟမ်?? ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် ၂၃ အတွက် မိုက်ကယ်အို၀င်ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်များ
January 22, 2022 - by Editor
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၂၃ ကို ကစားသွားရမှာ ဖြစ်ကာ ချဲလ်ဆီး vs တော့တင်ဟမ် တို့ရဲ့ လန်ဒန်ဒါဘီကတော့ ပရိတ်သတ်တွေ စိတ်အ၀င်စားဆုံး ပွဲစဉ် ဖြစ်နေပါတယ်။ မိုက်ကယ်အို၀င်က အဆိုပါ ပွဲစဉ် ၂၃ ရဲ့ ရလဒ်ကို ခန့်မှန်း သုံးသပ်သွားခဲ့ ပါတယ်။
၁~မန်ယူနိုက်တက် vs ၀က်ဟမ်း
ဗီလာကို ၂ ဂိုး အသာနဲ့ ဦးဆောင်ပြီးမှ သရေကျခဲ့ပေမယ့်လည်း မန်ယူနိုက်တက်ဟာ ကြားရက်က ဘရန့်ဖို့ဒ်ကို အဝေးကွင်းမှာ အနိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။ တိုက်စစ်ကစားပုံ ကောင်းမွန်ပေမယ့် ယူနိုက်တက်ဟာ ခံစစ်မှာ ပြိုင်ဘက်ကို အခွင့်အရေးတွေ ပေးတာ များလွန်းနေပါတယ်။ ဒီဂီယာ အကောင်းဆုံး ပုံစံ ရနေလို့သာ သက်သာရာရနေတာ ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ပွဲတိုင်းမှီခိုနေလို့တော့ မရပါဘူး။
ဒေးဗစ်မိုရက်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က လိဒ်ကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ အပေါ် ဒေါသထွက်နေမှာပါ။ ဟမ်းမားတို့ရဲ့ top4မျှော်လင့်ချက်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွေက ရလဒ်တွေကြောင့် တစ်ဖြည်းဖြည်း စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ခြေချော်မှုတွေ သိပ်များလို့တော့ မရတော့ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် နိုင်သင့်တဲ့ ပွဲစဉ်တွေမှာပါ။ ဒီပွဲမှာ ၀က်ဟမ်းရဲ့ တုန့်ပြန်မှုကို ကျွန်တော် မျှော်လင့်နေပါတယ်။ ထူးဆန်းတာကတော့ ၀က်ဟမ်းဟာ အသင်းကြီးတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရာမှာ ကစားပုံ ပိုကောင်းလေ့ ရှိပြီး သူတို့ရဲ့ ကစားဟန်နဲ့ အံကိုက်နေပါတယ်။ ကျွန်တော် ကတော့ ဒီပွဲ သရေကျမယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
ခန့်မှန်းချက် : မန်ယူနိုက်တက် ၁-၁ ၀က်ဟမ်း
၂~ဆောက်သမ်တန် vs မန်စီးတီး
၀ုဖ်နဲ့ပွဲမှာ ဆောက်သမ်တန်ရဲ့ ကစားပုံက စိတ်ပျက်စရာ ဖြစ်ပါတယ်။ စိန့်တို့ဟာ အိမ်ကွင်းမှာ ကစားပုံကောင်းမွန်ပြီး အနိုင်ယူရ ခက်ခဲပါတယ်။ နောက်ထပ် ဖရီးကစ်ဂိုး ထပ်သွင်းခဲ့တဲ့ ၀က်ပရောက်စ်ကိုတော့ ကျွန်တော် ချီးကျူးသွားရမှာ ဖြစ်ပြီး သူဟာ ဆောက်သမ်တန် အတွက် တကယ့်ကို အရေးပါတဲ့ ကစားသမားပါ။
မန်စီးတီးဟာ ဒီအချိန်မှာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး အသင်းလို့ သတ်မှတ်ရမှာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ဒါကို မြင်တွေ့နိုင်ပြီး သူတို့ဟာ အကောင်းဆုံး ပုံစံ ပြသခဲ့တာတော့ မဟုတ်ပေမယ့် ချဲလ်ဆီးကို သက်တောင့်သက်သာ အနိုင်ကစားခဲ့တာပါ။ ဒီဘရိုင်းနားရဲ့ ဂိုးဟာ တကယ့်ကို ကောင်းမွန်ပြီး သူ့ရဲ့ ပုံစံကောင်းကို ပြန်လည် ရှာတွေ့ နေသလိုပါပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ စီးတီးတို့ သက်တောင့်သက်သာ နိုင်သွားမယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။
ခန့်မှန်းချက် : ဆောက်သမ်တန် ၀-၂ မန်စီးတီး
၃~ခရစ်စတယ်ပဲလေ့စ် vs လီဗာပူး
ပဲလေ့စ်ဟာ ဒီရာသီမှာ နောက်ကျချေပဂိုး တစ်ချို့ ပေးခဲ့ရပြီး ဘရိုက်တန် ပွဲစဉ်မှာလည်း ဒါမျိုး ထပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပဲလေ့စ်ဟာ ဇယားလယ်မှာ ရပ်တည်နေပေမယ့် ဒီထက် မြင့်မားတဲ့ အဆင့်မှာ ရပ်တည်နိုင်သင့်တဲ့ အသင်း ဖြစ်ပြီး ဒါဟာ ဗီအဲရာ အတွက် စိတ်ပျက်စရာ ဖြစ်နေမှာပါ။ မိုဆာလား မာနေး တို့ မရှိပေမယ့် လီဗာပူးဟာ ဘရန့်ဖို့ဒ်နဲ့ ပွဲမှာကော အာဆင်နယ်နဲ့ ပွဲစဉ်မှာပါ ပြသနာ မရှိခဲ့ပါဘူး။
ဘရန့်ဖို့ဒ်နဲ့ပွဲမှာ ချိန်ဘာလိန် ကောင်းခဲ့သလို အာဆင်နယ်နဲ့ ပွဲစဉ်မှာလည်း ဂျိုတာက ခြေစွမ်းပြ ဂိုးတွေ သွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ မာနေး ဆာလား တို့ မရှိတာကြောင့် လွယ်ကူမှာ မဟုတ်ပေမယ့် လီဗာပူးဟာ ပဲလေ့စ်ကို အနိုင်ကစားနို်င်တဲ့ လုံလောက်တဲ့ အရည်အသွေးတော့ ရှိနေဆဲပါ။ ပဲလေ့စ်တို့ ဒီပွဲမှာ ဂိုးရလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် မြင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အိမ်ကွင်းမှာ အမြဲ အန္တရာယ် ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လီဗာပူးတို့ပဲ ပွဲအပြီးမှာ နိုင်သွားပါလ်ိမ့်မယ်။
ခန့်မှန်းချက် : ပဲလေ့စ် ၁-၃ လီဗာပူး
၄~အာဆင်နယ် vs ဘန်လေ
ဒါဟာ အာဆင်နယ် အတွက် အရေးကြီးပွဲစဉ် ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ဟာ အဆင့် ၄ နေရာအတွက် ပြိုင်ဘက်တွေ အဓိက ကျော်ဖြတ်ရမယ့် အသင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာ မာကျောတဲ့ ခံစစ်ကစားပုံကို ပြသနေပြီး ဒီအတိုင်းသာ ဆက်ကစားနိုင်မယ် ဆိုရင် ရမှတ်တွေ အများကြီး စုဆောင်းနိုင်မှာပါ။
ဘန်လေဟာ ၂ ပတ်လောက် ပွဲမကစားထားခဲ့တဲ့ အသင်း ဖြစ်နေတာကြောင့် လန်းဆန်းမှုတော့ ရှိနေမှာပါ။ သူတို့ဟာ တိုက်စစ်မှုး ခရစ်ဝုဒ်ကို နယူးကာဆယ်ထံ ရောင်းထားခဲ့တဲ့ အပြင် ပွဲဖျက်သိမ်းမှုတွေ ရှိနေတာကြောင့် အနှောက်အယှက်တွေ ရှိနေပါတယ်။ သူတို့ ဒီပွဲကို ဘယ်လို ကစားသွားမလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော် စိုးရိမ်မိပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အာဆင်နယ်တို့ အိမ်ကွင်းမှာ သက်တောင့်သက်သာ နိုင်သွားမယ်လို့ပဲ မြင်ပါတယ်။
ခန့်မှန်းချက် : အာဆင်နယ် ၂-၀ ဘန်လေ
၅~ချဲလ်ဆီး vs တော့တင်ဟမ်
ဒီပွဲဟာ နှစ်သင်းစလုံးရဲ့ ရာသီကို အဆုံးအဖြတ် ဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ ချဲလ်ဆီးဟာ ဘရိုက်တန်ကို သရေသာ ကစားနိုင်ခဲ့ပြီး စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာ ရလဒ် ကြုံခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ နောက်ပိုင်းမှာ ရလဒ်တွေ မကောင်း ဖြစ်နေပြီး အထူးသဖြင့် တိုက်စစ်မှာ ပုံစံကောင်းကို ရှာတွေ့ပြီး လူကာကူရဲ့ အကောင်းဆုံး ပုံစံကို ရဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ စပါးဟာ လက်စတာနဲ့ ပွဲစဉ်မှာ မယုံနိုင်စရာ ရလဒ်ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဒီနိုင်ပွဲနဲ့ ထိုက်တန်မှု ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုမျိုး အနိုင်ရခဲ့မှုဟာ တစ်သင်းလုံးကို စိတ်ဓာတ် တက်ကြွစေမှာပါ။
စပါးဟာ ကွန်တီရဲ့ လက်အောက်မှာ ရမှတ်တွေ အများအပြား စုဆောင်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချို့ ပွဲစဉ်တွေမှာ ကစားပုံ မကောင်းခဲ့ပေမယ့်လည်း ရလဒ်ကောင်းတွေ ရခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော် ကတော့ ဒီပွဲမှာ ချဲလ်ဆီးတို့ အသာရသွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ လိဂ်ဖလား ဆီမီးဖိုင်နယ်မှာ စပါးကို အိမ်ကွင်းမှာကော အဝေးကွင်းမှာပါ နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ နှစ်ပွဲစလုံး ဂိုးလည်း မပေးခဲ့ရပါဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီပွဲမှာ စပါးတို့ ဂိုးသွင်းနိုင်မယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ချဲလ်ဆီးတို့ ကပ်ပြီး နိုင်သွားမှာပါ။
ခန့်မှန်းချက် : ချဲလ်ဆီး ၂-၁ စပါး
အဲဗာတန် ၁-၁ အက်စတွန်ဗီလာ
ဘရန်ဖို့ဒ် ၀-၁ ဝုဖ်
လိဒ် ၂-၂ နယူးကာဆယ်
လက်စတာ ၁-၁ ဘရိုက်တန်
Previous Article ထရာအိုရေး အတွက် ဈေးပေးတာနည်းတဲ့ စပါး ၊ ဘာဆာ နဲ့ ဆွေးနွေးနေတဲ့ အော်စကာ ၊ ဆေးရုံက ပြန်ဆင်းတော့မယ့် ရွိုင်းအိုလာ တို့နဲ့ . . . ယနေ့ အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
Next Article ဝက်စ်ဟမ်း နဲ့ ပွဲအတွက် မသေချာတဲ့ ရိုနယ်ဒို ၊ ထရာအိုရေး နဲ့ နီးစပ်လာတဲ့ စပါး ၊ ပွဲကြို အခြေအနေတွေနဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းမျာ